Zithini iziqwenga ezibalulekileyo ngeli hlobo? | Amadoda aQinisekileyo
Iziqwenga ezintlanu ezibalulekileyo kweli hlobo
UMiguel Serrano | | fashion, Imizila
Xa kuziwa ekukhetheni iziqwenga ezibalulekileyo ngeli hlobo, sicacile. Kuya kufuneka babe sisiqhelo, kodwa kananjalo ubhetyebhetye kwaye unokubanakho ukuthatha ngaphaya kweli xesha lonyaka.
Kodwa ngaphezulu kwayo yonke loo nto, ihlobo kufuneka-linalo nje ukuba: umoya oshushu. La macandelo alandelayo ahlangabezana nazo zonke ezi mfuno, yiyo loo nto kunjalo Isiqalo esihle sokubumba ikhabethe lakho kwiinyanga ezimbalwa ezizayo:
1 Ihempe evulekileyo yekhola
2 Isuti yokuqubha
3 Izibuko zelanga ezijikelezileyo
4 Isingxobo esingasemva
Ihempe evulekileyo yekhola
Iklabhu yezemidlalo yeFreemans
Ikwayaziwa njengehempe enekhola yaseCuba okanye ikhola-yekampu, le ngubo ihlala ihlobo elinye phakathi kwezona zinto zibalulekileyo zewadi yamadoda. Plain, eprintiweyo okanye ipijama, ihamba kakuhle nge-chinos, ijini kunye nebhulukhwe emfutshane. Kwakhona ungayinxiba phantsi kwesuti yakho yasehlotyeni imbonakalo entsha, elungele umsitho.
Baphupha kubo bonke abathanda ilokhwe elungileyo. Ibhulukhwe leyo Idibanisa ukusebenza kweempahla zokudada kunye nobukhazikhazi beebhulukhwe zokunxiba. Ukulingana okugqibeleleyo, phakathi kwethanga kwaye ngaphandle kweepokotho, nto leyo eyenza ukuba ibe sisiqwenga esifanelekileyo sokuntywila ngokwenza ukubukeka okuhle konxweme okanye, kutheni kungenjalo, nakwisixeko.
Izibuko zelanga ezijikelezileyo
Ayinamsebenzi ukuba ukwivini, ungaphelelwa lixesha okanye ukhetha ukuchukumisa okwangoku. Kweli hlobo, iiglasi ezifashiniweyo zamkela iimilo ezijikeleziweyo. Ukutyibilika kwemigca apho abantu abadumileyo abanjengoJohn Lennon kunye noKurt Cobain kamva boyisakeleyo.
Ukubandakanya ubhaka kwi-arsenal yakho yezixhobo zasehlotyeni kuya kwenza ubomi bakho bube lula ngakumbi xa kuziwa ekuhambiseni izinto zakho zobuqu. Kuya kukunceda ukuba unxibe. Kwaye kunjalo Oobhaka ngumkhwa. Isiqwenga esibalulekileyo elunxwemeni, iintaba okanye ukuba uthatha isigqibo sokuchitha iiholide zakho esixekweni.
Eyona nto ixhaphakileyo, olu hlobo lwezihlangu luyinyani yehlobo ekufuneka ubenalo. Kwaye kunjalo ikhupha ngakumbi i-vibes zasehlotyeni kuneeteki kwaye zinobunkunkqele obungaphezulu kokungaphezulu kweeflops - ekufuneka zigcinelwe ulwandle kunye nephuli. Yenziwe ngezinto ezahlukeneyo, i-canvas iyakusebenza kakuhle kwinkangeleko engaqhelekanga, ngelixa ujonge ngakumbi, jonga i-suede kunye nesikhumba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » Iziqwenga ezintlanu ezibalulekileyo kweli hlobo
Ukufika kwehlobo. Izinto ezikhuselwe lilanga
Yintoni ongayikhetha? Ibhitshi okanye intaba? Indawo efanelekileyo yeeholide zakho